« Miala ilany »… | NewsMada
Asa, inona ihany ny mbola andrasan’ny fitondrana tsy hanamboatra ny governemanta na hanolo ireo minisitra tsy mahavita azy amin’izao fotoana izao. Teo aloha teo, nandeha be ny resaka amin’ny hoe tsy maintsy hirosoana ny fanamboarana ny governemanta. Efa tafajoro rahateo koa io ny Antenimierandoholona. Io mantsy ny hoe nandrasana. Izao ka hoe mbola mpisolo toerana indray ny heverina handray ny toeran’ireo minisitra voatendry senatera.
Raha bala mahafaty ny fimenomenonana, ny fitsikerana, ny fanamarihana samihafa ataon’ny olona, tsy vitsy ny efa dangy amin’ireo minisitra ireo. Maro ny tsy ahitam-pahombiazana fa vava sy fisehosehoana, ronono an-tavy sy fampandriana adrisa no betsaka. Ny an’ny sasany, aiza ka, efa ranon-tay (miala tsiny amin’ny fitenenana fa izay mihitsy no izy) izao no mivoaka ny « robinet », mbola mahita ialàna bala ihany. « Miala ilany », hoy ny tanora.
Ny hafa indray, efa voakororoka lava izao vao mba mody mihetsika. Efa hitam-poko hitam-pirenena izao ny mosary goavana, ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika mahazo ny ampahany betsaka amin’ny mponina any atsimon’ny Nosy, mbola mahita fanazavana ihany ny ao Ambohijatovo ao fa « tsy kere », hono, izany. Tsy hita mihitsy fa resaka ambony latabatra fotsiny izany hoe « fiahiana ny mponina » izany.
Ndeha holalovana fotsiny ny lafiny manodidina ny tontolon’ny fitsarana. Sehatra rainkon’ny kolikoly (maimbo ny dikan’izany) ka mampimenomenon-dava ny ankamaroan’ny olona. Tsy mahagaga raha anisan’ny mitana ny laharana voalohany hatrany amin’ny sehatra anjakan’ny kolikoly, araka ny fanadihadiana ataon’ny mpamakafaka, na avy eto an-toerana na ny any ivelany.
Tahaka izany koa ny amin’ity hoe fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary. Mampiteny ny moana ny aferafera, ny kiantranoantrano, ny « bizina » maloto ao anatiny. Tena adin’ny « mafia », toy ny any Amerika Latina sy Italia ireny ny zava-misy, raha tsy hiresaka afa-tsy ny fanondranana an-tsokosoko ny andramena, volamena… Ny vola, vola, vola no miteny. Nofinofy ririnina ihany ny hoe hisian’ny « trondro vaventy » ho voapaingotra sy higadra amin’io na hidradradradra fahazato sy arivo eo aza ny Amerikanina. « Fitsarana manokana » e !, « zéro coupe » e !… Teoria no betsaka. Ailika amin’ny teo aloha hatrany ny tsy fahombiazana. « Miala ilany ! »